1.2 Tao amin'ny toeram-pihibohana
2 Mizotra mankany amin'ny fanitsiam-pivavahana
2.2 Ny tsangan-kevitr'i Lotera
3 Ny reformasiona sy ny protestantisma
3.2 Fanohanana ara-politika an'i Lotera
3.3 Fandrosoan'ny protestantisma
4 Ny ankohonany sy ny andro sisa niainany
5 Ny teolojian'i Lotera
5.1 Ireo singa fototra ao amin'ny teolojian'i Lotera
5.2 Ny fahefan'ny Filazantsara manoloana ny Lalàna
5.5 Fanakianan'i Lotera ny fiainan'ny monka
5.6 "Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho!" (Sal. 31.1)
5.7 Fahalalahan'ny feon'ny fieritreretana
I Martin Lotera dia teraka tao Eisleben (ao amin'ny kontean'i Mansfeld, ankehitriny any Saxe-Anhalt) tamin'ny 10 Novambra 1483. Zanaka lahy voalohan'i Hans Luder sy Marguerite Zidler izy. Ny rainy, izay tantsaha fiaviana, dia nanjary mpiasa amin'ny fitrandrahana varahina tao amin'ny faritr'i Mansfeld, avy eo nisahana fitrandrahana varahina sy fandrendrehana metaly, izay nahatonga azy ho nahazo ny satan'ny bourgeois avy eo magistrat. Nanana rahalahy sy anabavy maro i Martin Lotera, ary nahatsapa ny tenany ho akaikin'ny rahalahiny iray atao hoe Jacob izy.
I Hans Luder, izay nanana hambom-po amin'ny tenany sy ho an'ny ankohonany, dia tapa-kevitra ny hanao izay hahalasa ny zanany lahy voalohany ho mpahay lalàna. Nalefany handranto fianarana tamin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa tao amin'ny sekoly latinan'i Mansfeld izy, avy eo tao Magdebourg sy tao Eisenach. Ireo sekoly telo ireo dia niompana tamin'ny "lalam-pianarana telo" (latin: trivium): ny fitsipiteny (gramera) sy ny fahaiza-mandaha-teny (retorika) ary ny fahaiza-mandrafi-kevitra (lojika). Nampitovin'i Lotera tamin'ny afo fandiovana ny fandefasana azy an-tsekoly, avy eo nampitoviziny tamin'ny afobe.
Tamin'ny taona 1501, tamin'ny faha-18 taonany dia niditra tao amin'ny oniversiten'i Erfurt izy ka tao no nahazoany ny maripahaizana bakalorea tamin'ny taona 1502 sy metrizy tamin'ny taona 1505. Nanana eritreritra ny hianatra lalàna izy, araka ny faniorian-drainy, tao amin'io oniversite io ihany nefa nandao ny fianarana izy teo no ho eo ihany, satria aminy dia zavatra miankina amin-javatra tsy azo antoka ny lalàna.
Nahatsiaro tena ho voasariky ny teolojia sy ny filozofia i Lotera, sady nilaza fa liana manokana amin'ny filozofa grika Aristotelesy (na Aristoty) sy ilay filozofa sy teolojiana anglisy William of Ockham ary ilay filozofa sy teolojiana alemàna Gabriel Biel. Nisy akony taminy ny hevitr'ireo mpitaiza azy, dia i Bartholomæus Arnoldi von Usingen sy i Jodocus Trutfetter, izay nampianatra azy hamerina mametraka fanontaniana momba ireo mpandinika malaza sy handinika misimisy ny zava-drehetra amin'ny alalan'ny fanandramana. Ny filozofia anefa tsy nahafa-po azy, satria mampanantena fanatanterahan-javatra ho an'ny saina fa tsy misy fifandraisany amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'i Lotera dia tsy afaka hitarika ny olona amin'Andriamanitra ny saina, ka izany dia nahatonga azy hanana fijery misabaka momba an'i Aristoty noho ny fanaovan'itsy farany ho zava-dehibe ny saina.
Amin'i Lotera, ny saina dia azo ampiasaina hametraham-panontaniana ny amin'ny olombelona sy ny andrim-piarahamonina, fa tsy natao hanontanian-javatra ny amin'Andriamanitra: ny olombelona dia tsy afaka mandinika an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fanambaràn-tenan' Andriamanitra, ka ny Soratra Masina mitana anjara toerana lehibe amin'izany.
Nandao ny oniversite izy ka niditra tao amin'ny fikambanan'ny mpirahalahy aogostiniana tao Erfurt tamin'ny 17 Jolay 1505. Taty aoriana dia nilaza izy fa vokatr'izao zava-niseho izao izany: tamin'ny 02 Jolay 1505 dia niverina an-tsoavaly tany Erfurt izy taorian'ny fialan-tsasatra fohy tany amin'ny fianakaviany. Nandritra ny orambaratra dia nisy varatra nilatsaka teo akaikiny. Noho izany dia nambarany tamin'ny rainy ny tahony ny fahafatesana sy ny fitsaran'Andriamanitra tamin'ny nikiahany hoe: "Vonjeo, ry Masimbavy Ana, hiova ho monka aho!" (na "Masimbavy Ana, raha vonjenao aho dia hanao monka!"). Ny Masimbavy Ana eto dia ilay lazain'ny lovantsofina katolika fa renin'i Maria renin'i Jesosy. Nieritreritra izy fa ilay antso vonjy nataony dia fampanantenana tsy azony disoina.
Izany fisahiranana ny amin'ny fahafatesana sy ny famonjena izany dia mampiavaka ny finoana kristiana tamin'ny faramparan'ny Andro Antenantenany: izany tebitebin'ny olon-drehetra -- izay nanjary an'olon-tokana izany -- dia nihoatra ny sehary ny fahafatesana ka niantefa any amin'ny ho fitsaran'Andriamanitra any an-koatra sy amin'ny fomba hiomanana amin'izany.
Nisy naman'i Lotera nilaza fa izany fanapahan-kevitra izany dia vokatry ny fangirifiriana nahazo an'i Lotera noho ny nahafatesan'ny namany roa lahy. Toa hita ho malahelo tokoa i Lotera. Hoy izy indray hariva raha nisakafo alohan'ny handeha: "Amin'izao andro anio izao dia mahita ahy ianareo, avy eo tsy hahita ahy intsony". Nahatezitra an-drainy mafy ny fandanilaniam-poana nataon'i Lotera.
Tao amin'ny toeram-pihibohana[hanova | hanova ny fango]
Tao amin'ny fikambanana mpangataka (latina: Ordines Mendicantes) misy ny Aogostiniana (mpanaraka ny fitsipik'i Aogostino) i Martin Lotera ka tao izy no nanandrana nikaroka tamin'ny alalan'ny fampijalian-tena (fanorotoroana ny nofo, fifadian-kanina, fiaretan-tory) izay antenainy fa hiantoka ny famonjena azy, nefa resy lahatra izy fa tsy ho tonga amin'izany. Tamin'izany fotoana izany ihany dia nanohy nianatra teolojia izy ka nanomboka nampianatra taty aoriana kely: natao ordinasiona ho pretra izy tamin'ny taona 1507 ary voatendry hampianatra filozofia tao amin'ny toeram-pihibohana (frantsay: couvent, latina: conventus) tao Erfurt izy. Lasa dokotera amin'ny teolojia izy tamin'ny taona 1512 ka lasa lehibem-pampiarana Baiboly tao amin'ny oniversiten'i Wittenberg (frantsay: Wittemberg), izay nisahanany ny asan'ny mpitory tenin'ny Fiangonana tamin'ny taona 1514.
Mizotra mankany amin'ny fanitsiam-pivavahana[hanova | hanova ny fango]
Ny mpanoratra sasany dia mihevitra fa ny hevitr'i Lotera ny amin'ny fanavaozam-pivavahana dia nanomboka tamin'ny fivahinian'i Lotera tao Roma tamin'ny taona 1510-1511 hikarakara ny raharahan'ny fikambanana misy azy. Tsy izany no tokony ho izy, ary ny fanararaotana nataon'ny mpitondra fiangonana tamin'izany fotoana izany dia tsy nanaitra an'i Lotera loatra. Ny lehibe indrindra dia ny fisahiranany tamin'ny famonjena sy ny asa soratra nataony momba ireo epistily nosoratan'i Paoly. Tsapany fa ifandroritan'ny firehana maro mitondra mankany amin'ny ratsy izy, ka ireo fanao atoron'ny Fiangonana azy, toy ny lamesa, fanambaram-pahotana (konfesy), fifadian-kanina, sns dia tsy nahafahany niala amin'ireo fahatsiarovan-tena ho meloka ireo. Ny fahazoany ny tian'i Paoly holazaina ao amin'ny Epistily ho an'ny Romana -- izay heveriny ho ny "Filazantsara amin'ny endriny madio indrindra" -- no nanome azy fitoniana. Izao no nosoratany taty aoriana: "Tamin'izany dia nanomboka azoko fa ny "fahamarinan'Andriamanitra" dia ilay ahaveloman'ny olo-marina amin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra, dia ny finoana, ka ny hevitr'izany (ny an'ny Epistily ho an'ny Romana, toko voalohany andininy faha-17) dia izao: "ny Filazantsara no nanambara amintsika ny fahamarinan'Andriamanitra ..., izay anamarinan'ilay Andriamanitra mpamindra fo amin'ny alalan'ny finoana ... Amin'izany dia nahatsiaro ho nateraka indray aho sady tafiditra amin'ny varavarana midanadana ao amin'ny paradisa. Tamin'izany fotoana izany indrindra dia miseho amiko amin'ny endrika vaovao ny Soratra Masina". Resy lahatra ny amin'ny herim-pamonjena ao amin'ny finoana i Lotera ary aminy dia ny fitokisana apetraka amin'i Jesosy irery ihany, izay tia ny olombelona rehetra na dia eo aza ny fahotana tamin'ny fototra, no manafaka tokoa. Resy lahatra i Lotera fa tokony hanaiky ny maha mpanota sy ny maha tsy tonga lafatra azy eo anatrehan'Andriamanitra ny olombelona, izay dia tsy misakana ny fieken-keloka. Mifanohitra amin'izany anefa ny fitiavana hamahana ny olan'ny fahotana izay tanterahina amin'ny alalan'ny indolzansy heverina ho afaka misolo manontolo na amin'ny ampahany ny fieken-keloka, izay aloa amin'ny alalan'ny vola -- amin'i Lotera dia fanao tsy afa-mikambana amin'ny famindram-po sady loza misakana ny fahalalana ny tena olana izany.
Ny tsangan-kevitr'i Lotera[hanova | hanova ny fango]
Nitranga tamin'ny taona 1517 ny tsy fifanarahana tamin'ny papa ny amin'ny indolzansy namoahan'ny papa Jolio II didy sady notohizan'ny papa Leo X mpa hamatsiam-bola ny fanamboarana ny bazilika Masindahy Piera, indolzansy notohan'ny arseveka-mpifidin'i Mayance Albert de Brandebourg tao amin'ny Empira Masina. Tamin'ny 31 Oktobra dia nanoratra tamin'ny arseveka i Lotera mba nangataka aminy ny tsy hanohana io indolzansy io sady nampiarahiny amin'ny taratasiny ireo tsangan-kevitra 95 izay mety nateraky ny fanararaotan'ilay dominikana atao hoe Johann Tetzel.
Nanafintohina an'i Lotera ny fanaovana raharaham-barotra ny indolzantsa izay nataon'ny papa Jolio II sy Leo X mba hanamboarana ny bazilikan'i Masindahy Piera ao Roma, ka namoaka ampahibemaso tamin'ny 31 Oktobra 1517 ny tsangan-keviny izy.
Araka ny lazain'i Phillipp Mélanchton, tamin'ny 31 Oktobra 1517 dia nofantsihin'i Lotera tamin'ireo varavaran'ny trano fiangonan'ny Olo-Masina ao Wittemberg ireo tsangan-kevitra 95 ireo izay manameloka amin'ny teny mafy ny fivarotana ny indolzansy nataon'ny Fiangonana katolika, ary mbola mafimafy kokoa ny fitenenany ny fanaon'ny mpitondra fivavahana ambony -- indrindra ny ao amin'ny papa. Ireo tsangan-kevitra 95 ireo, izay atao hoe Tsangan-kevitr'i Wittemberg, dia natonta pirinty tamin'ny faran'io taona io.
Nampikomy azy ny famoronana ireo tenim-pinoana (dogma) vaovao toy ny amin'ny afo fandiovana izy. Taoriana kelin'izany, izany niteraka ady hevitra teo amin'ny samy teolojiana sy teo amin'ireo mpianatra sy mpampianatra amin'ny oniversite izany ka nanjary raharaha nahakasika ny fiainanam-bahoaka sy ara-politika. Nampangain'i arseveka Albrecht tany Roma i Lotera. Ny papa Leo X dia nanoratra ny tahirin-kevitra nitondra ny lohateny hoe Exsurge Domine izay nandidy an'i Lotera hivadika amin'ny heviny, nefa nodoran'i Lotera teo anatrehan'ny vahoaka izany ary tafasaraka tamin'ny Fiangonana katolika izy tamin'ny taona 1521.
I Carlos V, emperoran'ny Empira Masina romana jermanika sady mpanjakan'i Espaina dia nampiantso an'i Martin Lotera tamin'ny taona 1521 teo anatrehan'ny fivoran'ny solontenan'ireo fajakana eo ambany fifehezan'ny emperoran'ny Empira Masina izay natao tao Worms.
Nantohana ny fiarovana ny ainy sy ny fahalalahany mba hahafahany miditra tao amin'ny fivoriana. Teo anatrehan'izany fivoriana izany dia nanda ny hiova hevitra i Lotera, ka nanambara fa resy lahatra amin'ny fambaràn'ny Soratra Masina sy nilaza koa fa eo ambany fahefan'ny Baiboly sy ny feon'ny fieritreretany izy fa tsy ambanin'ny fahefan'ny antanantohatry ny mpitondra fivavahana.
Nanapa-kevitra ny fivoriana tao Worms, rehefa noteren'i Carlos V, ny hanameloka an'i Lotera amin'ny alalan'ny fandroaha azy hiala ny faritry ny Empira. Noroahina tsy ho isan'ny Fiangonana tamin'ny 03 Janoary 1521, tamin'ny alalan'ny tahirin-kevitra voatombo-kase (latina: bulla pontificalis na bulla papalis) nosoratan'ny papa mitondra ny lohateny hoe Decet romanum pontificem.
Noraisin'i Friedrich III mpifidin'i Saksonia (alemàna: Friedrich der Weise von Sachsen), izay sakaizany, tao Wartburg i Lotera, ka tao izy no nanoratra ireo boky fantatra indrindra sady miely indrindra. Tao koa no nanombohan'i Lotera nandika ny Baiboly amin'ny teny alemàna avy amin'ny teny fototra, dia ny teny hebreo sy ny teny grika, ka izany fandikan-teny izany dia nisy akony ara-kolontsaina lehibe tamin'ny fandraiketana ny fiteny alemàna sy amin'ny fametrahana ny fototry ny asa fandikan-teny.
Ny reformasiona sy ny protestantisma[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny Oktobra 1518 i Martin Lotera dia nantsoina tany Aogsborga ka tao i Cajetan, izay nontsy apostolika, dia niandraikitra ny fandresen-dahatra azy hiala amin'ny heviny. Tsy najhomby anefa izany. Taorian'izany dia nanapa-kevitra ny papa Leo X haneho fihetsika misy fihavanana kokoa ka nanendry an'i Karl von Miltitz izay nontsy apostolika sady nisahana ny hametraka amin'i Friedrich III, mpiaro an'i Lotera, ilay Raozy volamena (haingo voatahin'ny papa) izay notsiriritiny nandritra ny telo taona, ka nanantena fa izany no handreseny lahatra azy hampitsahatra ny famelezan'i Lotera ny fanao momba ny indolzansy. Tamin'ny 5 sy 6 Janoary 1519 dia nihaona tamin'i Lotera tao Altenburg i Miltitz. Nahazo avy aminy ny fiantohana ny tsy hamoaka hevitra momba ny indolzansy sady nampanantena ny hampangina an'i Johann Tetzel sy i Albrecht von Brandenburg mpifanohitra aminy. Vokatr'izany fifampiresahana izany dia nanoatra tamin'ny papa i Lotera ka nampitondrainy an'i Miltitz ilay taratasy. Nisy fihaonana maro hafa koa natao teo amin'ireo lehilahy roa ireo tamin'ny 9 Oktobra 1519 tao Liebenwerda sy tamin'ny Oktobra 1520 tao Lichtenburg, ao akaikin'i Wittenberg, nefa efa tafasaraka tamin'i Roma i Lotera tamin'izany. Nisy fotoana mantsy nanamafisan'i Lotera ny fanoherany: tamin'ny Jolay 1519 tamin'ny fifandirany tamin'i Johann Eck (atao hoe Disputatio de Leipzig) nikarakara ny Reforma katolika tao amin'ny Empira, dia notoheriny koa ny tsy fetezan-disonan'ny konsily. Tamin'ny Jona 1520 dia namoaka ny tahirin-kevitra atao hoe Exsurge Domine, izay nampitahotra an'i Lotera ny haongana (hapotraka) ny tao Roma sady nampandoro ny boky nosoratany. Namaly izany i Lotera ka nandoro koa, tamin'ny 10 Desambra 1520 ny taratasin'ny papa sy ny lalàna kanonika. Tsy azo ialana noho izany ny fanonganana izay notononina tamin'ny 3 Janoary 1521 tamin'ny alalan'ny taratasin'ny papa atao hoe Decet Romanum Pontificem.
Ny sisa dia ny fandroahana an'i Lotera tsy ho ao amin'ny Empira Masina, izay tsy azo atao raha tsy mifanaraka ireo Fanjakana ao amin'ny Empira. Mba hanatrarana izany tanjona izany dia nampiantso an'i Lotera ho ao amin'ny fivoriana tao Worms i Carlos V, emperoran'ny Empira Masina romana jermanika, izay 21 taona, izay miteny fratsay nefa tsy mahay teny alemàna tsara. Nantohana ny fiarovana ny ainy mba hahafahany miditra ao amin'ny fivoriana tsy maninon-tsy maninona. Teo anatrehan'ny emperora anefa i Lotera dia nanda indray ny hiala ny heviny ka hanaraka ny faneren'ny Fiangonana, ka izao no teniny:
"Ry Mpanjaka be voninahitra sy ianareo Mpanapaka nitaky valin-teny tsotra tamiko. Izao no izy amin'ny teny tsy miolakolaka sy tsy amboamboarina. Afa-tsy ho resen-dahatra aho amin'ny fahadisoako amin'ny alalan'ny Soratra Masina aho na amin'ny antony mazava tsara -- satria tsy mino na ny papa na ny konsily irery aho satria miharihary fa matetika dia diso fiheverrana sy mifanohitra izy ireo -- izaho dia voafatotry ny lahatsoratry ny Soratra Masina izay ampatsiahiviko, ary ny feon'ny fieritreretako dia babon'ny Tenin'Andriamanitra; sady tsy afaka no tsy maniry ny hiala amin'ny hevitro aho na amin'inona na amin'inona, satria tsy azo antoka sy tsy mendrika ny manao zavatra mifanohitra amin'ny feon'ny fieritreretan'ny tena. Koa inty aho amin'izao andro anio izao. Tsy afaka manao zavatra ankoatr'izany aho. Hampian'Andriamanitra anie aho."
Taorian'izany dia notononina ny fanasokajiana azy ho isan'ny jiolahy tsy isan'ny vahoakan'ny Empira.
Fanohanana ara-politika an'i Lotera[hanova | hanova ny fango]
Voaroaka sady nisaina ho tahaka ny jiolahy azon'izay mahita azy vovonina tsy misy arakarakai Lotera. Na dia izany aza, ankoatry ny fiarovan'ny ankabeazan'ny vahoaka azy dia nisy koa fiarovana azy ara-politika, toy ny andriana ao amin'i Hesse, indrindra i Friedrich III, andriandahy mpifidy ao Saksonia.
Raha vantany voatonona ny fanamelohana azy dia naka azy i Friederich III izay natahotra sao misy mamono i Lotera. Izany hoe nisy olona atokisan'i Friederich izay naka an-keriny an'i Lotera raha namakivaky ny alan'i Thuringe izy tamin'ny 4 Mey 1521, vanimpotoana izay nitoerany tao amin'ny tranoben'i Altenstein, tao amin'i Burghard II Hund von Wenkheim, ka napetrak'i Friederich III tao amin'ny tranoben'i Wartbourg, ao akaikin'i Eisenach i Lotera. Nitoetra tao i Lotera hatramin'izay ka hatramin'ny 6 Marsa 1522 sady nitondra ny anaram-petaka hoe chevalier Georges. Tamin'izany no nanombohany nanao ny fandikan-teny ny Baiboly, ka ny Testamenta Vaovao no nanombohany izany. Araka ny lovantsofina dia nisy zavatra ahatsiarovana azy ao: indray andro dia raha niverina hampahory azy ny devoly ka nisakana azy tsy hiasa, dia notorahany ny fitoeran-dranomaintiny ilay devoly, ka namela loto teo amin'ny rindrina izany, izay mbola azo jerena ankehitriny. Rehefa afaka roa taona latsaka niafina i Lotera dia niverina tany amin'ny efitrano fitokanana tao Wittemberg, izay tsy nilaozany intsony hatramin'izany fotoana izany sady tsy nahatsapany intsony fanahiana.
Niely tamin'ny tanàn-dehibe manodidina maro ny Reformasiona, ka niteraka firaisan-kina alemàna izay tsy resin'i Carlos V, izay sahirana tamin'ny ady ara-tafika tamin'i Frantsa.
Tamin'ny fivoriana natao tao Speyer (frantsay: Spire) tamin'ny Avrily 1529 dia niezaka nandray an-tanana ny raharaha ny andriamanjaka, nefa nidona tamin'ny fanoheran'ny andriandahy enina sy tanàn-dehiba 14 izay nanambara mazava (protest) ny hampakatra ny raharaha amin'ny konsily raha mitady hiala amin'ny didy navoaka tao Worms ny emperora. Ny fivoriana natao tao Augsburg tamin'ny taona 1530 izay napakian'i Philipp Melanchthon ny Konfesiona Aogostana, dia nanamafy ny fanoheran'ireo andriandahy protestanta, izay nivondrona tao amin'ny "fivondronana ara-miaramilan'i Schmalkalden" (alemàna: Schmalkaldischer Bund) tamin'ny taona 1531.
Ireo mpitsikera dia manome tsiny an'i Lotera noho izy nanangana fivavahana tsy an'ny vahoaka. Nanome tsiny azy noho ny fihetsiny nandritra ny adin' ny Tantsaha alemàna (1524-1525), izay fikomiana nateraky ny fahantrana nefa koa misy ifandraisany amin'ny resaka fivavahana sy amin'ny fisahiranana manakaiky ny fisahiranan'i Lotera (maro amin'ny mpitarika ilay fihetsiketsehana no Anabatista). Tamin'ny Avrily 1525 dia nanao teny mahery dia mahery i Lotera raha nilaza fa mankasitraka ny famaizana tsy misy indra fo ilay fikomiana. Nisy olona 100 000 no maty tamin'izany. Amin'i Lotera dia fikomiana amin'Andriamanitra tenany ny fikomiana amin'ny andriamanjakany: Andriamanitra no nanome ny olona sasany ny tombontsoa manokana ahafahana manapaka ary na dia mety ho olon-tsy marina aza ny mpanapaka dia tsy ho diso hevitra Andriamanitra. Raha tapahin'ny andriamanjaka lozabe ny vahoaka dia fanasaziana avy amin'Andriamanitra izany.
Fandrosoan'ny protestantisma[hanova | hanova ny fango]
I Lotera no mpisava lalana tamin'ny fikatsahana ara-teolojika ho an'ny tena manokana, izay nisafidy ny teoljian'i Aogostino fa tsy ny teolojia skolastika, ka miompana amin'ny Soratra Masina sy ny tenan'i Kristy, manindry ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana, voaongana, i Lotera dia lasa lohan'ny fihetsiketsehana ara-pivavahana izay tokony halapmina haingana mba hialana amin'ny fihoaram-pefy. Tamin'ny taona 1522 tao Wittemberg, nandritra ny tsy fahafahany niala tao amin'ny tranobe tao Wartburg,dia nafana fo i Andreas Bodenstein von Karlstadt ka nanala tanteraka ny fanaovana lamesa ahitana ankolaka fisoronana, ka nanatanteraka ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny singa roa sady namporisika ny olona mba hanao tsinontsinona ny fanehoam-panoloran-tena ataon'ny vahoaka sy ny fanajana ny sary masina.
Na dia mpitahiry ny fombam-pivavahana nolovaina hatry ny ela aza i Lotera sady tsy te hantsoina amin'ny anarana hoe loterana fa kristiana ihany, i Lotera dia nampandroso ilay fiangonam-baovao tamin'ny fanarahana lalana manalavitra hatrany ny fombam-pivavahana romana. Namoaka fitaovam-pianarana ho an'ny vahoaka izy, dia ny boky nosoratany atao hoe Katekisma kely (1529), sy ho an'ny pastora, dia ny Katekisma lehibe. Nofoanany ny sakramenta "tsy araka ny Filazantsara" (ka tsy notazomina afa-tsy ny batisa sy ny eokaristia, na dia voatazona ihany ny fanaovana fanambaràm-pahotana (konfesy) tamin'ny toerana maro), ny fanafoanana -- noho ny antony ara-teolojia sy ara-pitondran-tena -- ny voadin'ny monka sy ny fitovoan'ny pretra, ny fifidianana pastora ataon'ny fiangonana isan-toerana, ny fanaovana ny fiteny alemàna ho fiteny amin'ny litorjia (1526), sns.
Raha ny momba ny fifandraisany amin'ireo firehana hafan'ny Reformasiona protestanta dia hita fa nifanohitra amin'i Ulrich Zwingli (izay nahatapahan'ny fifancdraisana tamin'ny fivoriana tao Marburg tamin'ny taona 1529) nefa nihavana ihany tamin'ny mpino protestanta tao Strassburg tamin'ny farany (toraka izany koa ny tao Basel sy tao Augsburg), tamin'ny nanaovana ny fifanarahan'i Wittemberg.
Na dia tsy nankasitraka ny fialan'ny monka haingana avy tao amin'ny toeram-pihibohana tao Wittemberg aza i Lotera, rehefa nandalina ny amin'ny voadin'ny monka, dia nanamafy ny fanamasinana ny fiainam-panambadiana sady nanambady relijiozy niala atao hoe Katharina von Bora tamin'ny taona 1525. Niterahany zaza enina izany fanambadiana izany. Tamin'ny taona 1534 no nahavitan'i Lotera ny fandikana ny Baiboly izay fantatra amin'ny anarana hoe "Baibolin'i Lotera". Tamin'ny taona 1544 dia lasa fanjakana loterana ny Fanjakan'i Soeda. Tamin'ny taona 1559 dia nanorina ny anglikanisma ny mpanjakavavy Elisabeth I, ary tao Frantsa dia nisy ny fivoriana (sinoda) voalohan'ny Fiangonana nohavaozina.
Ny ankohonany sy ny andro sisa niainany[hanova | hanova ny fango]
Nanambady an'i Katharina von Bora i Lotera ka niteraka zaza enina taminy, dia ireto avy: i Hans na Johannes (teraka tamin'ny 7 Jona 1526 tao Wittenberg, maty tamin'ny 27 Oktobra 1575 tao Königsberg), i Elisabeth (teraka tamin'ny 10 Desambra 1527 tao Wittenberg nefa maty volana vitsy taorian'izay, tamin'ny 3 Aogostitra 1528 tao ihany), i Magdalena (teraka tamin'ny 4 Mey 1529 tao Wittenberg, maty tamin'ny 20 Septambra 1542 teny an-tanan'i Lotera, tao Eisleben), i Martin (teraka tamin'ny taona 9 Novambra 1531 tao Wittenberg, maty tamin'ny 2 Marsa 1565 tao Wachsdorf), i Paul (teraka tamin'ny 28 Janoary 1533 tao Wittenberg ary maty tamin'ny 8 Marsa 1593 tao Leipzig) ary i Margarete (teraka tamin'ny17 Desambra 1534 tao Wittenberg, maty tamin'ny taona 1570 tao Mohrungen).
Tao Wittenberg misy ny tranony i Lotera no nandany ny androny sisa farany. Nararin'ny fahatsentsemam-batokelin'ny voa izy ary matetika tratran'ny faharerahan-tsaina sy ny fanahiana be (tamin'ny taona 1527, 1528, 1537, 1538) ka mety noho ny fahafatesan'ny zanany vavy Madalena izany na ny ireo fifandirana ara-pivavahana teo amin'ny samy Protestanta. Tsy nampihena fahafahany manohy ny adiny anefa izany. Ny mpifanandrina lehibe tamin'ny dia ny papa.
Maty i Martin Lotera rehefa avy nanambara ny finoany, tamin'ny izy tany Eisleben, tanàna nahaterahany, mba hampiravina tsy fifanarahana teo amin'ny mpitondra tao amin'ny kontean'i Mansfeld. Mety fahatapahana lalan-dra anaty atidoha no nahafaty azy. Milevina ao anatin'ny fiangonan'ny Olo-Masina (alemàna: Schlosskirche) ao Wittemberg i Lotera sy i Philipp Melanchthon.
Ny teolojian'i Lotera[hanova | hanova ny fango]
Miorina amin'ny Testamenta Vaovao ny teolojian'i Lotera sady manako ao aminy ny fiheveran'i Aogostino, ka tsy tahaka ny teolojia nahazatra hatramin'izay izay manazava ny amin'ny finoana. Teolojian'ny hazo fijaliana ny an'i Lotera fa tsy teolojian'ny voninahitra.
Ireo singa fototra ao amin'ny teolojian'i Lotera[hanova | hanova ny fango]
Matetika dia fintinina amin'ny fitanisana ny Sola sy ny Solus ("irery ihany") dimy ny teolojian'i Lotera izay saro-drafitra tokoa:
sola scriptura: ny Soratra Masina irery ihany, io no fenitra amin'ny finoana sy ny fanaon'ny Kristiana;
sola gratia: ny fahasoavana irenry ihany, dia ampy hahazoana ny famonjena fa tsy mila ezaka avy amin'ny olombelona;
sola fide: amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy ihany no ahazoana ny famonjena fa tsy amin'ny alalan'ny asa tsara ataon'ny olombelona;
solus Christus : i Kristy irery ihany, izay olona tokoa sady Andriamanitra tokoa, tamin'ny alalan'ny fanaovany sorom-pisoloana nataony teo amin'ny hazo fijaliana no ahafahana mahazo fanamarinana sy fanasitranana izay ampitaina amin'ny alalan'ny Filazantsara sy amin'ny alalan'ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo (na eokaristia);
soli Deo gloria: an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
Ny fahefan'ny Filazantsara manoloana ny Lalàna[hanova | hanova ny fango]
Tsy manana mpitari-dalana tsy mety diso ny olombelona hahitany ny lalana tena izy, dia tsy inona izany fa ny Tenin'Andriamanitra, ny Soratra Masina, izay manambara an'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fahasoavana madiodio sy ny finoana irery no amonjena ny olombelona. Mandresy lahatra ny olombelona hiaiky ny fahotany ny Fanahy Masina ka mitarika azy ho amin'ny fibebahana.
Manambara i Lotera fa miasa amin'ny olombelona amin'ny fomba roa Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny Lalàna sy amin'ny alalan'ny Filazantsara (na Evanjely). Ny Lalàna dia manondro ny zavatra andidian'Andriamanitra, indrindra araka ny raketin'ny didy folo sy ny fitsipi-pitondran-tena maro. Ny olona rehetra dia afaka mahalala ny Lalàna amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretany sy ny lovantsofina momba ny fitodran-tena izay hita ao amin'ny kolontsaina misy azy, na dia simba noho ny fahotana aza ny fahazoana izany, tsy miankina amin'ny zavatra mandresy lahatra azy araka ny fivavahana arahiny anefa izany.
Misahana anjara asa roa ny Lalàna. Ny voalohany dia ny fanomezana fahafahana ny olona tsirairay hampaharitra ny filaminana eo amin'ny tontolony sy ny fiarahamonina misy azy ary eo amin'ny fiainany, na dia eo aza ny elanelana mampisaraka azy amin'Andriamanitra sy amin'izao tontolo izay sy amin'ny mpiara-belona aminy ary amin'ny tenany ihany noho ny fahotana avy amin'ny fototra. Ny Faharoa, ny Lalàna dia ahafahan'ny olombelona lahatsapa ny filana famelam-pahotana, ka mitarika azy ireo ho any amin'i Kristy izany.
Andriamanitra dia miasa amin'ny olona amin'ny alalan'ny Filazantsara izay manambara fa nanolotra ny Zanany ho famonjena ny olona Andriamanitra. Ny Filazantsara no mahatonga ny finoana andraisana ny famelan-keloka sy ny fiainana ary ny famonjena atolotr'i Kristy amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Tsy toy ny Lalàna ny Filazantsara izay manambara ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitaky afa-tsy ny fanekenn'ny olona tsirairay an'izany.
Manamafy ny i Lotera fa raha mbola miaina eto ambonin'ny tany ny Kristiana dia sady olo-masina no mpanota. Olo-masina izy ireo raha matoky ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy amin'ny zava-bitan'ny tenany. Ny fahotana anefa dia hita ao amin'ny Fiangonana sy eto amin'izao tontolo izao, ka tsy fenitra halain-tahaka amin'ny fitondran-tena ny olona masina fa mpanota manaiky ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'i Lotera, na ny olona mendri-kaja indrindra, na ny olo-meloka indrindra dia samy mila famelan-keloka avy amin'Andriamanitra.
Milaza i Lotera fa ny teolojia kristiana dia teolojian'ny hazo fijaliana fa tsy teolojian'ny voninahitra. Ny olombelona dia tsy afaka hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alan'ny filozofia na ny fitsipi-pitondrantena. Tokony hiaiky ny olombelona fa tsy afaka hahita an'Adriamanitra izy raha tsy tapa-kevitra ny hampahalala ny tenany Andriamanitra. Ambaran' Andriamanitra ao amin'ireo teny manjavonjavon'ny toriteny ny fahendren'Andriamanitra, ambarany ny fahefany amin'ny alalan'ny fijaliana, ary ambarany ny hevitra miafin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana.
Fanakianan'i Lotera ny fiainan'ny monka[hanova | hanova ny fango]
Te hametraka ny vatana sy ny aina amin'ny maha izy azy i Lotera ka nanameloka ny fiainana maha monka. Ao amin'ny boky Dein Ruf ist dein Beruf ("Ny asanao no fiantsoana anao") dia nilaza izay fa ny fiantsoana ny tsirairay dia tsy ny hitady an'Andriamanitra ao amin'ny trano fihibohan'ny monka fa ny hohita vatana eo amin'izao tontolo izao. Izao no dikan'izany: "Nantsoina hiaina asa iray ianao".
"Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho!" (Sal. 31.1)[hanova | hanova ny fango]
Mandray ny olona mpanota izay miantoraka aminy Andriamanitra. Ny hany fifamatorana tokana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia ny finoana. Ny asa tsara fotsiny dia tsy afaka manao na inona na inona: tsy misy ilana azy ny fahalalahan-tanana, ny fiantrana, ny fitiavam-bavaka ... raha tsy manam-pinoana ny tena. Tokony miantoraka amin'Ansdriamanitra isika mba hahatsapa finoana; ny asa dia manaraka hoazy, toy izany koa ny famonjena. Ny teolojia loterana dia miompana amin'Andriamanitra Ray raha ny katolisisma tamin'izany fotoana izany nitodika amin'i Kristy mpanelanelana, ka miompana amin'i Kristy.
Fahalalahan'ny feon'ny fieritreretana[hanova | hanova ny fango]
Zava-dehibe amin'i Lotera indrindra ny fahalalahan'ny feon'ny fieritreretana.
Ny fandikan-teny ny Baiboly amin'ny fiteny alemàna, fiteny ifaneraseran'ny olona andavanandro, izay nataon'i Lotera, dia nampifanatona ny vahoaka amin'ny Soratra Masina sady nisy fiantraikany ara-kolontsaina lehibe, tamin'ny nahafahana nampiely fenitra momba ny fiteny alemàna soratana sy tamin'ny fanomezany fitsipika fototra ankapobeny teo amin'ny fomba fandikan-teny. Nisy akony lehibe ny izany fandikan-teny izany tamin'ny fandikan-teny ny Baiboly ho amin'ny fiteny anglisy atao hoe King James Version ("Dikan-tenin'i Jakoba Mpanjaka ").
Tamin'ny voalohany dia tsy dia niraharaha ny Bokin'i Estera, ny Epistily ho an'ny Hebreo, ny Epistilin'i Jakoba, ny Epistilin'i Joda, ary ny Bokin'ny Apokalipsy i Lotera. Nolazainy hoe "epistilim-bozaka" ny Epistilin'i Jakoba; hitany fa ireo boky ireo dia tsy dia miresaka firy ny amin'i Kristy sy ny asa fanavotana nataony. Mafy koa ny fitenenany momba ny Bokin'ny Apokalipsy, raha niteny izy fa tsy tsapany velovely ny maha vokatry ny Fanahy Masina an'io boky io.
Nampiahiahy azy ny maha voasoratry ny Apostoly ny Epistily ho an'ny Hebreo, ny Epistilin'i Jakoba, ny Epistilin'i Joda, ary ny Apokalipsy, ka nilazany fa ny maha kanonika azy ireo dia tsy neken'ny olon-drehetra tao amin'ny Fiangonana voalohany (ireo no atao hoe antilegomena). Na dia izany aza dia tsy nesorin'i Lotera avy tao amin'ny fanontany ny Soratra Masina ireo boky ireo. Niova ny fomba fijeriny momba ny sasany amin'ireo boky ireo taona vitsy taty aoriana.
Napetrak'i Lotera teo anelanelan'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao ireo boky atao hoe "apokrifa". Ireo boky ireo dia hita ao amin'ny Septoajinta grika nefa tsy hita ao amin'ny lahatsoratra masoretika hebreo. Nankininy tamin'i Phillip Melanchton sy i Justus Jonas ny fandikana ireo boky ireo. Tsy hita ao amin'ny lisitry ny boky tao amin'ny dikan-tenin'ny Testamenta Taloha tamin'ny taona 1523 ireo boky ireo, ka homena ny anarana hoe "apokrifa". Tao amin'ny fanontana tamin'ny taona 1534 dia nilaza i Lotera fa ambany lanja noho ny Soratra Masina ireo boky ireo, nefa ilaina sady tsara vakina ihany.
Tia mozika amin'ny endriny rehetra i Lotera sady mpamoron-kiram-pivavahana ka nampiditra tao amin'ny Fiangonana ara-pilazantsara ny hira misy fizaram-peo tokana na roa, natao amin'ny fiteny andavanandron'ny olona, hiran'ny mpiangona manontolo. Nantsoina amin'ny teny hoe "choral" ny hira noforonin'i Lotera ka lasa ivon'ny litorjia protestanta, ary ny fiantraikan'izany tamin'ny fandrosoan'ny mozika alemàna dia tsapa nandritra ny taona maro. Nanana ny anjara toerany lehibe i Lotera teo amin'ny sanganasan'i Johann Sebastian Bach izay nampiasa ny lahatsoratr'i Lotera hatao tonon'ny feonkira miisa 38. Ny fantatra indrindra amin'ireo hira fiderana nataon'i Lotera dia ilay mitondra ny lohateny hoe Ein feste Burg ist unser Gott na Ein' feste Burg (frantsay: C'est un rempart que notre Dieu; anglisy: A Mighty Fortress Is Our God; malagasy: He, Manda Fiarovana), izay fantatry ny Loterana indrindra sy ny Protestabhta hafa ankehitriny.
↑ Die Predigtdatenbank [tahiry].
↑ Izany no atao amin'ny teny fratsay hoe "mise au ban" sy amin'ny amin'ny teny alemàna hoe "Reichsacht" na amin'ny teny anglisy hoe "Imperial ban".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Lotera&oldid=980370"
Voaova farany tamin'ny 17 Febroary 2020 amin'ny 07:49 ity pejy ity.